သီလရှိမှသာ တောင်းတဲ့ဆုပြည့်နိုင်တယ် | BOTAHTAUNG PAGODA
သတ္တဝါတစ်ဦးက အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့ မင်းသူဌေးသူကြွယ်တွေပုဏ္ဏားသူဌေးသူကြွယ်တွေ ဂဟပတိသူဌေးသူကြွယ်တွေကို မြင်တွေ့ရတဲ့အခါ ငါလည်း ဒီလိုဖြစ်ရရင် ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ထားကလေး ပေါ်လာတယ်၊ ဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ဆောက်တည်တယ်၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ပြုတယ်၊ အဲဒီလို ပြုလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီဆောက်တည်ထားတဲ့စိတ်ထား, ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ထား, ဖြစ်လိုတဲ့ဆုတောင်း တောင့်တချက်ကြောင့် ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည် သူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ မင်းသူဌေးသူကြွယ် ပုဏ္ဏားသူဌေးသူကြွယ် ဂဟပတိသူဌေးသူကြွယ်တို့ရဲ့ အပေါင်းအဖော်အဖြစ်သို့ တစ်နေ့တော့ရောက်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာ ရောက်နိုင်သလဲ?
ဒီလိုကပ်ရောက်ရတဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝရတဲ့ ဒီလိုဘဝတစ်ခုကို ကပ်ရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သီလရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင် ငါဘုရား ဟောပါတယ်၊ သီလမရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ငါဘုရားမဟောဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ?
သီလတွေ စင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်ရဲ့တောင့်တချက် မှန်သမျှသည် မချွတ်ဧကန် ပြီးစီးပြည့်စုံတတ်တယ်။ အလားတူပဲ - စတုမဟာရာဇ် တာဝတိံသာ ယာမာ တုသိတာ နိမ္မာနရတိ ပရနိမ္မိတဝသဝတ္တီ ခေါ်တဲ့ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ် ရောက်လိုခဲ့တယ်ဆိုရင်, ဗြဟ္မာ့ပြည်ရောက်လိုခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ သီလတည်းဟူသော မြေပေါ်မှာ ရပ်တည်ပြီး ပြုစုပျိုးထောင်လိုက်တဲ့ ကံတွေကသာလျှင် ရောက်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းအားရှိတဲ့အကြောင်း ဆက်လက်ဟောကြားထားတော်မူတယ်။
ဒီတော့ သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ကုသိုလ်ကံနှင့် သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ကုသိုလ်ကံသည် တူညီတဲ့အကျိုးရှိမလား? မရှိဘူး။
ပါဏာတိပိပါတိနာ = သူ့အသက်ကို သတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ ကတံ = တည်ထောင်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့။ ကုသလကမ္မံ = ကုသိုလ်သည်။ ဥဠာရံ = ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုး များမြတ်တဲ့အကျိုးရှိသည်။ န ဟောတိ = မဖြစ်နိုင်။
ဒီဃာယုကပဋိသန္ဓိံ ဇနေတုံ န သက္ကောတိ၊ (မ-ဋ္ဌ-၄-၁၇၉။)
ဒီဃာယုကပဋိသန္ဓိံ = အသက်ရှည်တဲ့ ပဋိသန္ဓေကို။ ဇနေတုံ = ဖြစ်စေအံ့သောငှာ။ န သက္ကောတိ = မစွမ်းနိုင်။
ပါဏာတိပါတအမှုကို လွန်ကျူးနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က တည်ထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ကံသည် အသက်ရှည်တဲ့ ပဋိသန္ဓေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းအား မရှိဘူး။ သူ့အသက်ကို သတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာန်မှာသူတစ်ပါးရဲ့ အသက်ကို တိုသွားစေလိုတဲ့ စိတ်ထားက ရှိနေပြီး ဖြစ်တယ်။
ဒီစိတ်ထားမျိုးက မိမိ အသက်တိုဖို့ရန် အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင် အသက်ရှည်ချင်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ? ပါဏာတိပါတကံတွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုတယ်၊ သူတစ်ပါးကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လိုတဲ့ စိတ်ထားကလေးတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ မလိုဘူးလား? လိုအပ်တယ်။
အသက်ရှည်တိုင်း ကောင်းတယ်လို့ ဘုန်းကြီး မပြောလိုပါဘူး၊ သို့သော် မိမိကဘဝကိုလည်း ဆုံးအောင် မလုပ်နိုင်သေးလို့ သံသရာ ခရီးတစ်ခုကို ဆက်စရာ
ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ အသက်တိုတာနှင့် အသက်ရှည်တာ ဘယ်ဒင်းက ကောင်းမလဲ?
အသက်ရှည်တာက ကောင်းတယ်။ ကျန်းမာတာနှင့်
မကျန်းမာတာ ဘယ်ဒင်းက ကောင်းမလဲ? ကျန်းမာတာက ကောင်းတယ်။ဒါကို ပြောလိုရင်းပါ၊ ဘဝတစ်ခုဟာ သိပ်ကောင်းတယ်လို့ ချီးမွမ်းနေတာ မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဧဝံ ပါဏာတိပါတော အပ္ပါယုကသံဝတ္တနိကော ဟောတိ။
သူ့အသက်ကိုသတ်တဲ့ ပါဏာတိပါတကံက အသက်တိုစေတယ် ဆိုတာဒီလိုပုံ ဒီနည်းလမ်းအားဖြင့် အသက်တိုစေတာပါ။